होमपेज / अर्थ / कला / नितालाई छाडेर सम्पदातिर ?
नितालाई छाडेर सम्पदातिर ?	11 Jan 2016 | 14:58pm सोमबार २७ पुष, २०७२
काठमाडौं–राजनीतिमा एउटा कथन छ, 'कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन।' यो कथन मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। एक समय थियो, अभिनेत्री अनु शाह र निता ढुंगाना असाध्यै मिल्थे। हरेक कार्यक्रममा एक साथ पुग्थे, फुर्सदको समय सँगै बिताउँथे। आफूहरू एकदमै निकट साथी रहेको र अरू कोही साथी नभएको बताउँथे । तर, यो मित्रता लगभग सकिए जस्तो छ । स्रोतका अनुसार अब यी दुईबीच 'हाई–हेल्लो'को सम्बन्धमात्र छ । निता प्रेमी आमेश भण्डारीसँग 'डेटिङ'मा छिन् । 'प्रेमी पाएपछि साथी छाडेर जानेहरूसँग केको मित्रता गाँस्नु ?' एक कार्यक्रममा अनुले घुमाउरो शैलीमा व्यंग्य पनि गरेकी थिइन् । अनु अचेल नितालाई छाडेर मोडल सम्पदा बानियासँग नजिकिएकी छिन् । प्रायः कार्यक्रममा अनु र सम्पदा सँगै देखिन थालेका छिन् ।
यतिसम्म कि आफ्नो फिल्मको कार्यक्रममा पनि अनु सम्पदालाई लिएर जाने गर्छिन् । भर्खरै सम्पन्न डी सिने अवार्डमा पनि उनी सम्पदासँगै पुगेकी थिइन् । त्यहाँ एउटै हलमा बसे पनि निता र अनु बोलेको देखिएन । निता ब्वाइफ्रेन्ड आमेशसँगै रमाइरहेकी थिइन्, अनु सम्पदासँग । 'अनु अब नितालाई छाडेर सम्पदातिर ?' फिल्मकर्मी ठट्टा गरिरहेका थिए । « कसका लागि को 'रेडी' ?
'बिकाउ होइन कथाको माग' »
हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)काठमाडौं— नेपाल चीन संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले १८ जेठ (३१ मे) देखि काठमाडौं—दोहा रुटमा दैनिक सिधा उडान गर्ने भएको छ। हिमालयको एयरबस ३२०—२१४ जहाज काठमाडौंबाट राति ११ बजे उड्नेछ भने...	अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि२९ वटै वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्तसम्म)को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एक दुई अपावादलाई छाड्ने हो भने सबै वाणिज्य बैंकले विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलन र...	अर्थ	५ प्रतिशत कर्मचारीको तलव बृद्धि हुँदा ९५ प्रतिशत जनता मारमाकाठमाडौं–सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेकाे छ। याे कर्मचारीका लागि खुशीकाे कुरा हाे...	गौतम बुद्ध अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थललाई ७ अर्ब २२ करोडकाठमाडौं— सरकारले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थललाई ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।...	पोखरा अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थललाई ५ अर्बकाठमाडौं— सरकारले पोखरा अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन...	पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्नेकाठमाडौं— सरकारले भारतबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रुपैयाँ बढाउने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको...	भर्खरै...